Igama leSanchez Igama kunye Nemvelaphi - Ngokuphathelele ulwalamano
I-Sanchez yintsimi yegama elithi "unyana kaSancto," esusela kwilizwi elidumiweyo elibizwa ngokuthi iSancho, elisentsingiselo ethi "ngcwaliswe," evela kwi-Latin sanctus .
I-Sanchez yi- 8 inqabileyo ebizwa ngeSpain , kunye negama le- 33 eliqhelekileyo e-United States.
Inye igama elongeziweyo Igama: ISANCHES, SANZ, SAINZ, SAENZ, SAIZ, SAEZ, SANGUEZ, SANCHIZ
Abantu abaPhezulu abaneSigname SANCHEZ
USonia Sanchez - umbongi waseMelika kunye nomdlali
U-Oscar Arias Sánchez - owayengumongameli weCosta Rica; Umvuzo weNobel Peace Prize
UMark Sanchez - iNFL yekota yebhola yebhola
URick Sanchez - i-anchor yase-American Cuban ye-CNN
UFrancisco del Rosario Sánchez - oyise oyisiseko seRiphabliki yaseDominican
- umyili weVenzuelan
Kuphi Abantu abaneSANCHEZ Igama Lakho?
Idatha yokusabazisa igama igama kwi-Forebears i-Sanchez njengenombolo ye-92 eqhelekileyo kwihlabathi, ifunyenwe kakhulu eMexico apho abantu abangaphezu kwezigidi ezili-1.5 babelana ngefowuni. Yiyona yesibini igama eliqhelekileyo e-Ecuador, e-4 ePeru, kunye ne-5 ePanama, ne-Andorra kunye neRiphabliki yaseRominican. I-Sanchez iphinda ibe ne-7 eSpain, eVenezuela, naseCosta Rica, e-8 eMexico naseColombia, e-9 eNicaragua, kunye ne-10 e-Argentina. EYurophu, i-Sanchez ifunyanwa ngokuqhelekileyo kwingingqi yasePyrenees yaseFransi, ngokutsho kweWorldNames PublicProfiler. EUnited States, igama lidla kakhulu kwilizwe laseNew Mexico.
Izibonelelo zoGenesalogy for the name SANCHEZ
I-Sanchez Crest Family - Akusikho Oko Ucinga
Ngokuchasene noko ungayiva, akukho nto injengeSanchez yentsapho okanye isambatho seengalo kwiSenchez. Iingubo zeengalo zinikwe abantu ngabanye, kungekhona iintsapho, kwaye zingasetyenziselwa ukusetyenziswa kuphela ngabantu abangenakuphazanyiswa inzala yomntu oye wanikwa ingubo yeengalo.
ISanchez kwiNkundla yoLwazi lweentsapho
Khangela le bhansela elithandwayo lokuzalwa komnxeba weSanchez ifani ukuze ufumane abanye abanokuphanda ookhokho bakho, okanye ukuthumela umbuzo wakho weSanchez.
Uhlobo loSapho - iSANCHEZ Genealogy
Ukufikelela ngaphezu kwe-7.7 yezigidi zeengxelo zembali zamahhala kunye nemithi yentsapho edibeneyo yomgca othunyelwe kwiSenchez kunye neenkcukacha zayo kule ncwadana yamahhala yendawo yokuzalwa yemveli eyabanjwe yiCawa likaYesu Kristu we-Saints-Day Saints.
I-SANCHEZ Igama lomnxeba kunye neeNcwadi zoLondolozo lwentsapho
Uluhlu lothumelelo lwamahhala lwabaphandi beSenchez kunye neenkqubela zalo ziquka iinkcukacha zokubhaliselwa kunye neengxelo ezifunayo zokufumana imilayezo edlulileyo.
DistantCousin.com - ISANCHEZ Ulwabiwo lomlando kunye nomlando weentsapho
Hlola ii-database zolwazi zamahhala kunye neefayili zodidi lwegama lokugqibela igama elithi Sanchez.
I-Sanchez Genealogy and Family Tree Page
Dlulisa amehlo kwimithi yentsapho kunye neziqhagamshelwano kwiirekhodi zomthonyama kunye neembali zabantu ngabanye abanegama lokugqibela elithi Sanchez kwi-website yeGenesalogy Today.
Ubalulekileyo kunye Nemvelaphi ebizwa ngokuba ngu "Howard"
I-Broken Window Fallacy
UTro Cruise Uthetha Ngokuthi "USamurai Wokugqibela"